You are here: Home Biography [SHAN]
Published on Friday, 05 January 2018 16:01
eBook file size: 74.6 KB
ebook pages: 7
Publication: Treasure from Tai Great Texts, Paper Collection of the 4th Lik Loung Conference, 2016.
Brief: This is Lik Loung Paper in whichastory tells Buddha arrived at Mandalay Hill and Ogress offer her breast by cutting and makeawish to beapowerful king in the future and then he really becameaking and ruled the kingdom but he was too old to beaking that time but he became very young again after had the golden mango etc...
Historic sites and monuments of Mandalay and environs - U Lu Pe Win
မန္တလေးဖြစ်စဉ် - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
A Visit To The King Of Burmah At Mandalay In October 1868
Archaeological Notes on Mandalay - Taw Sein Ko
Chronology of Mandalay - Dr. Than Tun
မန္တလေး မြေမြို့ရိုးကြီး - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
မဏ္ဍလေးမှ မန္တလေး - ဦးဣန္ဒိယ
မန္တလေးမြို့ နန်းတော်တည်ဆောက်ခန်း - ဦးလှတင်
Published on Friday, 05 January 2018 15:38
eBook file size: 70.6 KB
Publication: Collection of Research Papers, The 2nd Conference of Tai Society for Historical Studies Book., 2016.
Brief: In this paper explains why Shan(Tai) peoples should study Shan(Tai) literature in order to preserve one's own cultures, language, customs, etc... and, if not, worry that to disappear one day if Tai(Shan) peoples not hand down to their generations our Shan(Tai) literature.
Published on Wednesday, 27 December 2017 10:22
eBook file size: 74.3 KB
ebook pages: 6
Publication: Rangoon University Tai Youth Magazine 1960-61
Brief: Telegram in which described Panglong Agreement Treaty with Burma, Kachin and Chin Hills leaders.
ပင်လုံစာချုပ်ရှင်းတမ်း (လက်စွဲစာအုပ်) - ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန်
ပင်လုံဇာတ်ကြောင်း - ရဲထွန်း
THE FOUNDING OF THE UNION OF BURMA THROUGH THE HILL PEOPLES EFFORTS - The Memoirs of Khun Kya Bu of Hsipaw Signatory to the Panglong Agreement
ပင်လုံကျောက်တိုင် တည်ဆောက်သူများ - သန်းဝေ(တောင်ကြီး)
ပင်လုံစိတ်ဓာတ် - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်
ပင်လုံကျေးဇူး - တင်ဧ(ရှမ်းပြည်)
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ - ဦးဖေခင်
ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ ခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာ ရှမ်းပြည်၏နစ်နာချက်များ ပြည်ထောင်စုတွင်းမှ တန်း​တူသော ရှမ်းပြည် (၄-အုပ်တွဲ) - ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)
လိၵ်ႈဢၸီႇရင်ႇၶမ်ႇ ၵေႃႇမသိၼ်ႇထုင်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး တၢင်ႇသွင်းထိုင် ဢၽွႆႉဢူးၸီးမိူင်းတႆး 1969, ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႊ 31
Published on Friday, 05 January 2018 15:23
eBook file size: 88.9 KB
ebook pages: 15
Publication: Myanmar Historical Research Journal, No.(7), June, 2001.
Brief: The Paper in which How Tai Ethnic settled in Myanmar and which regions they were and which time they reigned the countries, their ancestors kings who after who ruled the kingdom and founded which kingdom, etc...
Published on Wednesday, 27 December 2017 10:07
eBook file size: 836 KB
ebook pages: 17
Publication: မြန်မာ့သမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ ၂ဝ၁၂ ၊ ဇွန်လ၊ အမှတ် (၂၂)၊ နှာ ၁၆၅-၁၈၄။
Brief: ဝန်းသိုမြို့ တည်ထောင်ပုံ၊ ဝန်းသိုမြို့ အကျယ်အ​ဝန်း၊ ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသော စော်ဘွားဆက်များနှင့်၄င်းတို့၏ ဘွဲ့များ၊ အဆောင်အယောင်၊ အစီးအနင်းများကို လေ့လာသုတေသနပြုထားသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်းသို​စော်ဘွားကြီး၏ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်မှတ်တမ်း - ဘုန်းခြိမ့်
အနတ္တသာသနာ မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် တရားတော် - ဝန်းသိုမြို့ ခန္တီးဆရာတော်ဘုရားကြီး
ပျဉ်းမနားသမိုင်း - ကျော်ငြိမ်း(အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့)
ခမ်းတီးလုံဒေသသမိုင်း - မီမီလွင်(သုတေသနအရာရှိ)
တိုင်းဂုံတို့ ရမုံအကနှင့်ယောက်တို့ဒေသ အလှဒဿနများ - တင်ဝင်း(ကသာ)
လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေဳးႁဳꨲတႆး ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင်သၵ့်ၵတဢၵ့်ၶရဳꨲတီႇပၵ - ၸရေးသၢင်ႇသိင်း(မိူင်းပွၼ်)